Fampiasana haino aman-jery sosialy avy amin'ny Faritra US | Martech Zone
Fampiasana haino aman-jery sosialy avy amin'ny Faritra US
Alakamisy, Jona 16, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Na dia i Silicon Valley, New York ary Chicago aza no mety ho farafaran'ny haitao, haino aman-jery ary dokam-barotra, fanadihadiana iray vaovao kosa no mampiseho fa ny orinasa kely sy salantsalany any amin'ny Great Plains sy atsimo atsinanana dia mitarika ny firenena amin'ny fananganana media sosialy. Raha mijery ny valim-pirenena, 75% ny valinteny dia milaza fa ny orinasan'izy ireo dia tsy manana tranokala media sosialy misy marika ankehitriny. Moa ve ireo valim-pikarohana ireo milaza ny fiovan'ny mpandray an-tanana voalohany ny afovoan'ny firenena?
Notarihin'i Zoomerang, fanadihadiana iray amin'ireo mpanapa-kevitra maherin'ny 500 kely sy mpanelanelana antonony dia manome ny fakana sary an-tsaina ny fananganana haino aman-jery sosialy isaky ny faritra:
Ny Great Plains sy ny fanjakana atsimo atsinanana dia azo inoana fa nanisy fantsona media sosialy tamin'ny 30% sy 28%.
Ireo mpanapa-kevitra ho an'ny orinasa ao amin'ny Great Plains (22%) sy atsimo atsinanana (28%) dia anisan'ny mavitrika indrindra amin'ny alàlan'ny media sosialy amin'ny anaran'ny orinasan'izy ireo
Ho fanampin'ny fampiasana media sosialy, ny fanadihadiana dia manome ny fomba fijerin'ny mpanapa-kevitra ny fampiasana ny media sosialy ataon'ny mpiasa:
15% amin'ireo nohadihadiana no namoaka politika sosialy ho an'ny mpiasa
6% no nandroaka mpiasa iray noho ny fanararaotany ny media sosialy
Ny zavatra manaitra amin'ity statistika ity dia ny ankamaroan'ny orinasa tsy nandray ny haino aman-jery sosialy nomena ny fotoana. Raha iray amin'izy ireo ny orinasanao dia manana ny fahafahan'ny mpifaninana amin'ny sahona mitsambikina ianao amin'ny alalàn'ny tetikady media sosialy. Inona no andrasanao?
Iza marina ny mpihaino kendrenao?
Jun 27, 2011 ao amin'ny 12: 41 PM
Data mahaliana… tsy maintsy misy zavatra bebe kokoa azontsika, mpamatsy haino aman-jery sosialy atao mba hanafainganana ny fananganana. Ny lalan'ny sidina dia feno fitarihana, famporisihana, 'ahoana', fampiroboroboana… avy amintsika rehetra nefa mbola mihetsika miadana isika amin'izao vanim-potoana izao izay misy ny 'hafainganam-pandeha ny fiainana'. Inona koa no tokony hataontsika?
Jun 27, 2011 ao amin'ny 4: 16 PM
Heveriko fa nahazo maso mainty ny fiarahamonina rehefa nivoaka ny gurus rehetra ary nikiakiaka momba ny halehibeny nefa tsy dia nahafantatra ny fomba fampiasana azy amin'ny fomba mandaitra. Mba hahafahan'ny orinasa mandray an-tanana dia tokony ho tsapan'izy ireo fa safidy iray eo amin'ny tombom-barotra na mety ho faty. Tsy mino aho fa mila mandray an-tanana ny orinasa tsirairay avy mba ho salama sy hahazo tombony… fa raha toa kosa ny indostria sy ny fifaninanana ataon'izy ireo dia ahiana tokoa izany. Ny asa ho antsika dia ny mampiseho azy ireo ny tombony sy ny fiverenana izay azon'ny fiaraha-monina omena… ary koa ny loza mety hitranga!